Anyị na-egosi gị ngwa 5 iji hichaa ngwaọrụ gam akporo gị Akụkọ akụrụngwa
Olee otú ọcha gị gam akporo ngwaọrụ: cache, akụkọ ihe mere eme na ndị ọzọ
Anyị nwere ọtụtụ ngwa maka ịrụ ọrụ nke ihicha gị gam akporo ngwaọrụ, na m na-apụtaghị na-a chamois na-egbu maramara na ihuenyo, ma na ikwu na sistemụ arụmọrụ na faịlụ ya, ebe ọ bụ na ka anyị na-eji ya, ndị ọzọ cache ọ ga-enwe na nchọgharị ma ọ bụ na-achọ akụkọ ihe mere eme nwere ike gbasaa enweghị anyị Anyị ghọtara. You ga-eche na mgbe anyị nọ n'ihu ngwaọrụ mkpanaka ma ọ bụ kọmputa, enwere ike ịha nhata n'ụzọ zuru oke na ụgbọ ala, nke kwesịrị ịlele site n'oge ruo n'oge, yana mgbanwe mmanụ na-abụkarị ọrụ a chọrọ ka ọ bụrụ puku ole na ole kilomita
Taa, anyị wetara gị ngwa ise ga - enyere gị aka ịnwe ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba gị n’ụzọ zuru oke, dịka CCleaner, App Cache Cleaner, Startup Manager, History Eraser and Disk Usage. Ngwa ole na ole ga - enyere gị aka nke ukwuu ọ bụrụ n’ịchọpụta na ekwentị gị anaghị arụ ọrụ otu esi adị na ị chọrọ miri emi cache ma ọ bụ akụkọ ihe mere eme ihicha.
2 Ngwa Cache Cleaner
3 Njikwa Mmalite
4 Nhicha akụkọ ihe mere eme
5 Iji Diski
Ihe omume kacha mma n'ezie maka kọmputa kọmputa na na nso nso a anyi nwere na gam akporo. N'etiti ya kacha mma atụmatụ anyị na-ahụ ike ogbe iwepụ ngwa, ikpochapụ nchọgharị akụkọ ihe mere eme, ngwa cache, oku na-aga akụkọ ihe mere eme na ọbụna clipboard.
Ga-enwe ụdị atọ dị iche iche dị iche iche: onye na-ehicha ihe, njikwa ngwa na ozi sistemụ. Banyere ihicha ọnụ gị, onye nhicha bụ ihe kacha mkpa. Pị nyocha ga-agwa gị gbasara ebe nchekwa ị nwere ike ihichapụ. Cheta na oghere ngwa ahụ nwere ozi ebudatara na ekwentị gị, yabụ ọ bụrụ na ihichapụ Google Play Music n'onwe ya, ị ga-ehichapụ faịlụ egwu ebudatara.
para nwee ike ịwụnye CCleaner, ị ga-agbaso usoro anyị na-egosi n'isiokwu a na anyị dere n'oge na-adịbeghị anya ma gosi gị otu esi ebudata ya.
Ngwa Cache Cleaner
Ngwa a na - eje ozi, dị ka aha ya na - egosi, ka kpochapụ oghere ngwa na i nwere na ọnụ gị. Nke a dị irè iji kpochapụ ebe nchekwa dị n'ime nke ị nwere, ma si otú a hapụ ohere, ebe ọ bụ na ị wụnye ọtụtụ ngwa ma malite iji ha, oge ga-abịa na ohere ga-agwụ gị, yabụ ọ ga-aba oke .
Ga-enye ndụmọdụ lerukwu anya na ngwa ndi ị ga-ehichapụ ebe nchekwa tupu emee, karịsịa ndị chọrọ ka faịlụ egwu ma ọ bụ faịlụ ndị ebudatara na nchekwa gị na igwe ojii. Enwere ọrụ iji hichapụ ihe nzuzo niile nke ngwa niile mana kpachara anya. Ihapu site na njikọ a.
Ngwa a ga-elekọta nyochaa ntinye niile ị nwere n'azụ, ọ ga-ewepu ngwa ma ọ bụ usoro achọghị, wee nye gị arụmọrụ nke ngwa ndị eji ekwentị arụ ọrụ mgbe emegharịrị ma ọ bụ gbanye ya.
Lee ị ga-a havea ntị ka ị kwụsị ọrụ dị ka elekere mkpu ma ọ bụ ụfọdụ nke dị oké mkpa dị ka Google Play Servicenke ozo site na sistemụ. Ngwa ndị ibudatara ma wụnye aka gị bụ ndị ị ga-emerịrị n'ọnọdụ ụfọdụ, ndị ọzọ na-ahapụ ha ka ha dị. Iji budata ya site ebe a.
Nhicha akụkọ ihe mere eme
Ngwa a bụ ụdị nke CCleaner, ma ị ga-enweta ihe niile na aka, site na ịtọhapụ nchekwa dị n'ime, nhichapụ ihe nchọgharị akụkọ ihe mere eme, akụkọ ihe mere eme, ebe nchekwa ngwa, nyocha ọchụchọ Google, wdg.
Ngwa na anọwo na gam akporo ruo ogologo oge ọ bụkwa otu n'ime ihe akwadoro ka ekwentị gị dị njikere. Free ngwa si njikọ a.
Ngwa a ga - enyere gị aka jikwaa nchekwa dị n'ime nke ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba, nakwa na ọ ga-egosi gị ọhụụ n'ụzọ dị mfe yana ọ bara ezigbo uru. Na nlele ngwa ngwa ị ga - ama ole ohere ị nwere na ọdịnaya multimedia dị ka egwu ma ọ bụ ihe oyiyi, ma ọ bụ ọbụna ohere nke usoro ma ọ bụ ngwa ahụ.
Ngwa dị mfe ma dị ike nke bụ n'efu dị ka ndị ọzọ niile na anyị ga-ewetara gị taa site na Vinagre Asesino.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Olee otú ọcha gị gam akporo ngwaọrụ: cache, akụkọ ihe mere eme na ndị ọzọ
Otu esi ehichapụ faịlụ na Windows
Sweetlọ Na-atọ :tọ: Ntọala nke Onye Ọjọọ